Ku Faro Adayg Lixdan Xidig! -Jurgen Klopp Oo Si Muhiim Ah Loogu Sheegay Lixda Ciyaartoy Ee Aanu Ogolaan In Ay Anfield Ka Baxaan. - Gool24.Net
Ku Faro Adayg Lixdan Xidig! -Jurgen Klopp Oo Si Muhiim Ah Loogu Sheegay Lixda Ciyaartoy Ee Aanu Ogolaan In Ay Anfield Ka Baxaan.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa loo soo jeediyay tallo muhiim ah iyada oo loo sheegay liiska lixda ciyaartoy ee ay waajibka ku tahay in uu Anfield ku sii ilaaliyo.
Khabiirka ESPN FC ee Alejandro Moreno ayaa xidigo mustaqbalkooda shaki la galino waxa uu Klopp kula taliyay in aanu Anfield ka fasixin isaga oo aan soo qaadin magacyada ciyaartoyda markii horeba la ogaa in ayna Liverpool waqti xaadirkan ka baxayn.
Alejandro Moreno ayaan soo qaadin magacyada Alisson Becker, Van Dijk, Mohamed Salah iyo magacyada la midka ah kuwaas oo ay inta ugu badan dadku aaminsan yihiin in ayna Liverpool meel uga socon.
Laakiin Alejandro Moreno ayaa Klopp u soo jeediyay in uu kooxdiisa ku sii haysto ciyaratoy in badan shaki la galinayo in ay xili ciyaareedka soo socda ku sii nagaan karaan Anfield.
Ugu horayn khabiirka ESPN ee Alejandro Moreno ayaa Klopp u soo jeediyay in aanu James Milner ka dirin kooxdiisa wuxuuuna sababta ku sheegay: “Waa ciyaartoy faa’iido badan, waxa uu ka ciyaari karaa boosas kala duwan, hogaaminta iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa laga yabaa in aan la helin, sababtoo ah qolka labiska kuma jirno”.
“Laakiin waxa aynu maqalnay waa in James Milner uu yahay nooca ilbax oo aad ka doonaso in uu joogo koox sida Liverpool oo kale ah” ayuu Alejandro Moreno hadalkiisa raaciyay.
Xidiga labaad ee uu Alejandro Moreno tallo ugu soo jeediyay Klopp in uu sii haystaa wa Naby Keita wuxuuna yidhi: “Waa mid xiiso leh, sababtoo ah waxaa jiray waqtiyo cadaan ah oo uu lahaa Naby Keita, laakiin waxa uu sii waday in uu dhaawacmo, sidaa daraadeed qaab ciyaareed joogto ah kuma arkaysid”
“Wali isaga fursad ayaad siinaysaa, waxaan filayaa in uu sii joogo doono” ayuu Alejandro Moreno hadalkiisa ku daray.
Xidiga saddexaad ee uu Alejandro Moreno doonayo inaanu Klopp ka dirin Liverpool waa Xherdan Shaqiri wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in ninkani uu hadda yahay muran abuure, sababtoo ah ee aragtida dibada ee laga haysto Shaqiri sanadihii la soo dhaafay waxa uu u baahnaa in uu ciyaaro, waxaa uu leeyhaay shaqsiyada gaar ah”.
“Waxaan filayaa in aad sii haysato Shaqiri, sababtoo ah, halis ayuu kuu noqon karaa, faa’iido badan ayuu kuu yeelan karaa”.
Xidiga afraad waa Divock Origi wuxuuna Alejandro Moreno oo ka hadlayaa yidhi: “Waxaan filayaa in ay sii haysan doonto Origi. Waxba kama qabo in aanad Origi ka doonayn 20 gool sanadkii, laakiin waad ka dalbanaysaa marka uu soo galo, goolal ayuu dhaliyaa, haddii aad jeceshahay Origi iyo haddii kaleba, waxa uu Liverpool u dhaliyay goolal muhiim ah”.
Xidiga shanaad ee uu Alejandro Moreno doonayo in Klopp uu ku faro adaygo ayaa ah Sadio Mane wuxuuna yidhi: “Haddii aan boodhka Liverpool joogi lahaa, waxaan sheegi lahaa: ‘Ninkani waa ka sii wada in uu inaga caawinaya in aan waxyaabo waa wayn samayno waqti xaadirkan. Ma ogin waxa ay ragga soo socdaa noqon doonaan, waan ognahay waxa uu ninkani yahay ee uu dhamaan kooxda u yahay”.
“Waxaan filayaa in Sadio Mane uu sii joogi doono” ayuu Alejandro Moreno hadalkiisa ku adkeeyay isaga oo aaminsan in Liverpool ay xidigan sii ilaashato.
Xidiga lixaad ee uu khabiirka Alejandro Moreno tababare Klopp ku adkeeyay in uu sii ilaashadaa waa Roberto Firmino wuxuuna yidhi: “Waa hagaag, Roberto Firmino waa nin ay dadku sheegeen in uu yahay xabag/ dhamaan wuu ka shaqaysiiyaa”.
“Isaga la’aantiis, Salah iyo Mane aad ayay u aamusnaan lahaayeen. Sidaa daraadeed, waxaan ku tagayaa in aan sheego in uu isagu sii wato qabashada shaqadaas oo uu sii joogo”.